Yakobo 5 NA-TWI - Ahonya ho kɔkɔbɔ - Afei, mo adefo - Bible Gateway
Yakobo 4Petro I 1
Yakobo 5 Nkwa Asem (NA-TWI)
5 Afei, mo adefo nso muntie! Munsu na muntwa agyaadwo wɔ amanehunu a ɛreba mo so no ho. 2 Mo ahonya no aporɔw na nweweboa awe mo ntama. 3 Mo sika ne mo dwetɛ awe nkanare na saa nkanare no bedi adanse atia mo, na ahyew mo honam sɛ ogya. Nna a edi akyiri yi mu moahyehyɛ agyapade. 4 Nnipa a wɔyɛɛ adwuma wɔ mo mfuw mu no, muntuaa wɔn ka enti wɔresi apini. Na wɔn apinisi no adu Onyankopɔn, Awurade Tumfo no aso mu.